Ho hentitra amin’ny fampiharan-dalàna ny Emmo/Nat: tsy mahazo mivoaka ny faritra ny razana matin’ny Covid-19 | NewsMada
Ho hentitra amin’ny fampiharan-dalàna ny Emmo/Nat: tsy mahazo mivoaka ny faritra ny razana matin’ny Covid-19
Manoloana ny resabe etsy sy eroa, mikasika ny fandevenana ireo olona matin’ny Covid-19, na koa ireo maty noho ny antony hafa, nitondra fanazavana, omaly, ny eo anivon’ny Emmo/Nat. Mazava ny fanambarana: tsy mahazo mivoaka ny faritra mikatona ny razana matin’ny Covid-19.
“Analamanga fa tsy Antananarivo akory no mikatona fa misy ireo diso hevitra. Mikatona amin’ny fivezivezena. Tsy mahazo mifamezivezy ny olona fa ny entana ihany no afaka mifamezivezy, saingy ny mpamily sy ny mpanampy mpamily ary ny tompon’entana irery ihany ny ao anaty fiara miaraka amin’ny antontan-taratasy mazava momba azy ireo”, hoy ny kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena (ComGN), ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety tao anatin’ny fivoriana miaraka teo anivon’ny Emmo/Nat teny amin’ny Toby Ratsimandrava momba ny fampiharana ny hamehana ara-pahasalamana tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19. Nanaovan’ity manamboninahitra ity tsindry manokana fa mikatona tanteraka ny faritra Analamanga. Nohamafisiny fa faritra Analamanga ny resahina eto fa tsy Antananarivo Renivohitra satria betsaka ireo olona diso hevitra. Izany hoe, any amin’ny toerana hifaranan’ny faritra Analamanga no mipetraka ny sakana. Ohatra noraisiny ny eny amin’ny lalam-pirenena fahafito (RN7): eo Tsinjony (faran’ny faritra Analamanga) no misy sakana ataon’ny mpitandro filaminana raha any Ramala kosa ny sakana ho an’ny lalam-pirenena fahefatra (RN4).
Efa misy ny fepetra raha matin’ny Covid…
Nambaran’ny ComGN ny momba ny fivezivezen’ny razana ka nilazany mahitsy fa raha matin’ny Covid ny olona iray, efa misy ny fepetra sy lamina mifanaraka amin’izany momba ny fandevenana ary indrindra, ny isan’ny olona manatrika ny fandevenana aza, latsaky ny 10, araka ny fanazavany. Raha tsy Covid-19 kosa ny nahafaty ilay olona, manaraka ny lalàna momba ny antontan-taratasy rehetra manamarina izany ny fianakavian’ilay olona maty. Manatona eny amin’ny BMH mikarakara izany antontan-taratasy rehetra izany vao afaka mivoaka ny faritra ny razana. Naka ohatra mihitsy ity manamboninahitra ity fa raha any Tsinjony no tratra eo amin’ny sakana ka tsy mazava ny antontan-taratasy rehetra momba ny fahafatesan’ilay olona, alevina eo Tsinjony ilay olona, raha ny fanazavany hatrany. Tsy azo ataon’ny tompon-kavana, araka izany, ny mitondra ny razana mandeha mivoaka ny faritra. Raha minia mandika izany izy ireo, hisy ny fepetra hentitra horaisina mifanaraka amin’izany, araka ny nambarany.